10 Ehab nwere ụmụ ndị ikom iri asaa+ na Sameria.+ Ya mere, Jihu dere akwụkwọ ozi zigara ndị isi+ Jezril, ndị okenye+ na ndị na-elekọtara Ehab ihe na Sameria, sị: 2 “Mgbe akwụkwọ ozi a rutere unu aka, unu na ụmụ onyenwe unu nọ, ụgbọ agha na ịnyịnya+ na obodo e wusiri ike na ihe agha dịkwa n’aka unu. 3 Họpụtanụ onye kasị mma na onye kasị bụrụ ezi mmadụ n’etiti ụmụ ndị ikom onyenwe unu, meenụ ka ọ nọkwasị n’ocheeze nna ya.+ Buokwaranụ ụlọ onyenwe unu agha.” 4 Egwu wee tụọ ha nke ukwuu, ha wee malite ịsị: “Lee! Eze abụọ+ eguzolighị n’ihu ya, olee otú anyị onwe anyị ga-esi guzo?”+ 5 N’ihi ya, onyeisi ụlọ ahụ na onyeisi obodo ahụ na ndị okenye na ndị nlekọta+ ahụ zigaara Jihu ozi, sị: “Anyị bụ ndị ohu gị, anyị ga-eme ihe niile ị ga-agwa anyị. Anyị agaghị eme onye ọ bụla eze. Mee ihe dị mma n’anya gị.” 6 O wee degara ha akwụkwọ ozi nke abụọ, sị: “Ọ bụrụ na unu dịnyeere m,+ ọ bụrụkwa na unu na-erube isi n’ihe m kwuru, burunụ isi ndị ikom bụ́ ụmụ+ onyenwe unu bịakwute m ụdị ugbu a echi na Jezril.”+ Ma ụmụ eze, bụ́ ndị ikom iri asaa, nọ n’ụlọ ndị a na-akwanyere ùgwù n’obodo ahụ, bụ́ ndị na-azụlite ha. 7 O wee ruo na ozugbo akwụkwọ ozi ahụ ruru ha aka, ha kpọọrọ ụmụ eze gbuo, ya bụ, ndị ikom iri asaa,+ e mesịa, ha wụnyere isi ha na nkata ma buru ha bugara ya na Jezril. 8 Onye ozi+ ahụ wee bata, sị ya: “Ha ebutewo isi+ ụmụ eze.” O wee sị: “Kposanụ ha ka ha dịrị ikpo abụọ n’ọnụ ụzọ ámá ruo ụtụtụ.”+ 9 O wee ruo ụtụtụ na ọ pụrụ. O wee guzoro otu ebe, sị ndị ahụ niile: “Unu bụ ndị ezi omume.+ Lee, m gbaara onyenwe m izu+ wee gbuo ya;+ ma ònye gburu ndị a niile? 10 Maranụ na ọ dịghị ihe ọ bụla dị n’okwu Jehova nke Jehova kwuru ga-eme ụlọ Ehab+ ga-ada n’ala n’emezughị;+ Jehova emewokwa ihe o kwuru site n’ọnụ ohu ya bụ́ Ịlaịja.”+ 11 Jihu wee gbuokwa ndị niile fọdụrụ n’ụlọ Ehab n’ime Jezril na ndị ya niile a na-akwanyere ùgwù+ na ndị ha na ya maara na ndị nchụàjà ya,+ ruo mgbe ọ na-enweghị onye ọ hapụrụ ka ọ fọdụrụ ya ndụ.+ 12 O wee bilie bata, gawa Sameria. Ụlọ ndị na-azụ atụrụ na-edebe atụrụ dị n’ụzọ ahụ. 13 Jihu wee zute ụmụnne+ Ehazaya+ bụ́ eze Juda. Mgbe ọ sịrị ha, “Ùnu bụ ole ndị?” ha sịrị: “Anyị bụ ụmụnne Ehazaya, anyị na-agbadakwa ịga mata otú ụmụ eze na ụmụ nne eze mere.” 14 Ozugbo ahụ, ọ sịrị: “Jidenụ ha ná ndụ!”+ Ha wee jide ha ná ndụ, gbuo ha n’olulu mmiri nke dị n’ụlọ a na-edebe atụrụ, ya bụ, ndị ikom iri anọ na abụọ, o kweghị ka otu onye n’ime ha fọdụ.+ 15 Ka o si n’ebe ahụ na-aga, o zutere Jehọnadab+ nwa Rikab+ ka ọ na-abịa izute ya. Mgbe ọ gọziri+ ya, ọ sịrị ya: “Obi gị ò ziri ezi n’ebe m nọ, dị nnọọ ka obi m dị n’ebe obi gị dị?”+ Jehọnadab wee zaa, sị: “O ziri ezi.” “Ọ bụrụ na o ziri ezi, nye m aka gị.” O wee nye ya aka ya. O wee dọgote ya n’ụgbọ ịnyịnya.+ 16 O wee sị ya: “Soro m gaa ka ị hụ otú m ga-esi mee ka a ghara ịma Jehova aka.”+ Ha wee buru ya n’ụgbọ ịnyịnya agha ya na-aga. 17 N’ikpeazụ, ọ bịaruru Sameria. O wee na-egbu ndị niile fọdụụrụ Ehab n’ime Sameria, ruo mgbe ọ lara ha n’iyi,+ dị ka okwu Jehova gwara Ịlaịja si dị.+ 18 Jihu kpọkọtakwara mmadụ niile wee sị ha: “Ehab fere Bel ofufe nke nta.+ Ma Jihu ga-efe ya nke ukwuu. 19 Ya mere, kpọọnụ ndị amụma niile+ nke Bel, ndị niile na-efe ya ofufe+ nakwa ndị nchụàjà ya niile+ ka ha bịakwute m. Ka a ghara ịchọ onye ọ bụla achọ, n’ihi na enwere m nnukwu àjà m ga-achụrụ Bel. Onye ọ bụla a chọrọ achọ agaghị adịrị ndụ.” Ma Jihu ji aghụghọ mee ihe,+ ka o wee bibie ndị na-efe Bel. 20 Jihu wee sị: “Doonụ nzukọ ukwu nsọ maka Bel.” Ha wee kpọsaa ya. 21 E mesịa, Jihu zisara ozi n’Izrel dum,+ nke mere na ndị niile na-efe Bel bịara. Ọ dịghị otu onye fọdụrụ nke na-abịaghị. Ha wee na-abata n’ụlọ Bel,+ ụlọ Bel wee ju n’ọnụ site n’otu nsọtụ ruo na nsọtụ nke ọzọ. 22 O wee sị onye na-elekọta ebe a na-edebe ákwà: “Chịpụtara ndị niile na-efe Bel uwe.” O wee chịpụtara ha uwe. 23 Jihu wee banye n’ụlọ Bel, ya na Jehọnadab+ nwa Rikab. O wee gwa ndị na-efe Bel, sị: “Chọzienụ achọzi, hụkwanụ na e nweghị onye ọ bụla n’ime ndị na-efe Jehova so unu nọrọ ebe a, kama ọ bụ naanị ndị na-efe Bel.”+ 24 N’ikpeazụ, ha batara ịchụ àjà nkịtị na àjà nsure ọkụ, Jihu mere ka ndị ikom iri asatọ guzooro ya n’èzí, o wee sị: “Nwoke ọ bụla nke gbapụrụ n’ime ndị ikom m na-etinye n’aka unu, mkpụrụ obi onye ahụ ga-anwụ n’ọnọdụ mkpụrụ obi onye ahụ gbapụrụnụ.”+ 25 O wee ruo na ngwa ngwa Jihu chụsịrị àjà nsure ọkụ ahụ, ozugbo ahụ ọ gwara ndị ọgba ọsọ na ndị osote ndị isi ndị agha, sị: “Batanụ, gbuonụ ha! Unu ekwela ka onye ọ bụla gbapụ.”+ Ndị ọgba ọsọ na ndị osote ndị isi ndị agha+ wee malite iji ihu mma agha na-egbu ha ma na-atụpụ ha n’èzí, ha nọkwa na-aga ruo n’ihu arụsị nke ụlọ Bel. 26 Ha wee bupụta ogidi nsọ+ dị n’ụlọ Bel wee kpọọ nke ọ bụla ọkụ.+ 27 Ha kwatukwara ogidi nsọ Bel,+ kwatuokwa ụlọ Bel,+ ha wee mee ka ọ bụrụ ebe ịga mposi+ ruo taa. 28 Jihu wee si otú a laa Bel n’iyi n’Izrel. 29 Ọ bụ naanị na Jihu ahapụghị mmehie Jeroboam+ nwa Nibat ji mee ka Izrel mehie,+ ya bụ, ụmụ ehi ọlaedo,+ nke otu n’ime ha dị na Betel, otu adịrị na Dan.+ 30 Ya mere, Jehova sịrị Jihu: “Ebe ọ bụ na i mewo nke ọma n’ime ihe ziri ezi n’anya m,+ i mewokwa ụlọ Ehab+ ihe niile dị m n’obi, ụmụ gị ndị ikom ga-anọkwasịrị gị n’ocheeze Izrel ruo ọgbọ anọ.”+ 31 Ma Jihu elezighị anya were obi ya dum+ jee ije n’iwu Jehova bụ́ Chineke Izrel. Ọ hapụghị mmehie Jeroboam ji mee ka Izrel mehie.+ 32 N’oge ahụ, Jehova malitere ibipụ Izrel nke nta nke nta; Hazel+ wee na-egbu ha n’ókèala Izrel dum, 33 malite na Jọdan n’ebe ọwụwa anyanwụ, ya bụ, ala Gilied+ dum, ụmụ Gad+ na ụmụ Ruben+ na ụmụ Manase,+ malite n’Aroa,+ nke dị n’akụkụ iyi ndagwurugwu Anọn, ọbụna Gilied na Beshan.+ 34 Ihe ndị ọzọ metụtara Jihu na ihe niile o mere na ike niile ọ kpara, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 35 N’ikpeazụ, Jihu sooro nna nna ya hà dinaa,+ ha wee lie ya na Sameria; Jehoahaz+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 36 Ụbọchị niile Jihu chịrị Izrel n’ime Sameria dị afọ iri abụọ na asatọ.